CALCIOPOLLI-DII INGIRIISKA: Man City oo ay dhici karto in dhibco & horyaal laga xayuubiyo & xiddigo ay iska iibin karto, magacyada | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha CALCIOPOLLI-DII INGIRIISKA: Man City oo ay dhici karto in dhibco & horyaal...
CALCIOPOLLI-DII INGIRIISKA: Man City oo ay dhici karto in dhibco & horyaal laga xayuubiyo & xiddigo ay iska iibin karto, magacyada
(Manchester) 16 Feb 2020 – Kooxda Manchester City ayaa u baahan inay dib u qaabayn buuxda ku samayso hannaankeeda maaliyadeed, taasoo keeni karta iibinta xiddigo ay ka mid yihiin Raheem Sterling, Kevin De Bruyne iyo Aymeric Laporte.
Taasi waxay badiyaa dhaboobi kartaa, haddii ay Maxkamadda Xeerbeegista Ciyaaraha ee CAS iska diiddo rafcaanka Man City ka qaadatay mamnuucidda labda sano ah ee laga saaray Champions League iyo koobabka ay UEFA qaban qaabiso, kaddib markii ay baraxa ka badisay koonto xisaabeedkeeda, iyagoo ku tumanaysa xeerka FFP.
Waxaa taa ka daran halis maxalli ah oo City kasoo wajahaysa dhanka Premier League iyadoo ay dhici karto in laga xayuubiyo horyaalladii ay hanatay ka bilow 2014 hadidi ay Premier League baaris ku helaan inay kooxdu xisaabaad is dhaaf dhaafisay, taasoo ay City dafirsan tahay ilaa haatan.
Macallin Pep Guardiola ayaa taageersan moowqifka naadiga oo ah inaysan haatan ku jirin halis deg deg ah, waxaan sidoo kale weli arrintan ka hadlin EPL, balse waxaa si wayn suuqa ugu jirta in ay dhici karto in sidoo kale dhibco laga jaro kooxda City, taasoo saamayn doonta, haddii ay dhacdo, boosaskii ay kooxdu gashay xilliyada loo garto in dhibcaha la jaro.
Arrintan ayaa u qaab eg wixii 2006-dii ka dhacay Serie A ee Calciopolli, goortaasoo Juventus loo dhaadhiciyey Serie B, laba horyaalna laga jaray, kuwaasoo mid la siiyey Inter Milan.
Previous articleGOOGOOSKA: Atalanta vs AS Roma 2-1 (Roma oo la ruugey)
Next articleArag sida ay reer HARGAYSA uga fal-celiyeen warka sheegaya in MW Farmaajo halkaa tegayo